Semalt बाट सुझावहरू कसरी तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूलाई सबैभन्दा धेरै बनाउने बारे सुझावहरू
एक समय थियो जब खोज इञ्जिनमा प्रतिस्पर्धीको उच्च स्तरले कम्पनीहरूलाई धम्की दिइरहेको थियो। जे होस्, वर्तमान डिजिटल दुनिया असीमित अवसर प्रदान गर्दछ। प्रतिस्पर्धीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा एसईओ रणनीति सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छन्।
प्रतियोगीहरूको एसईओ प्रदर्शन र अनलाइन उपस्थितिको विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै, तपाईं आफ्नो वेबसाइटको विकासको व्यक्तिगत विधिहरूको विस्तृत गर्न सक्नुहुन्छ। Semalt विशेषज्ञ, निक Chaykovskiy सात अभ्यासहरू संकेत गर्दछ जसले तपाईंलाई प्रतिस्पर्धीहरूको अधिकतम लाभदायक बनाउन मद्दत गर्दछ।
१. नि: शुल्क सामग्री
लगातार नवीन अभिनव विचारहरू चुनौतीपूर्ण छ। निश्चित मार्केट कोठामा प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरू हेर्दै, तपाईं आफ्नो ब्ल्ग सामग्रीका लागि नयाँ विचारहरू लिन सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरु द्वारा प्रदान जानकारी को लागी व्यवसाय को भविष्य को प्रवृत्ति को एक सामान्य परिप्रेक्ष प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। व्यापारले प्रतिस्पर्धीहरू द्वारा विकसित गरिएको अवधारणा सुधार गर्ने अवसर खोज्नुपर्दछ।
२ लिंक मिररिंग
विचार बाहिर लिंक स्रोतहरू सम्पूर्ण एसईओ रणनीति को प्रदर्शन सुधार गर्न सक्दछ। लिंक विश्लेषणले तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरूलाई वेबसाइटहरूले के लि links्क दिन्छ भन्ने कुराको समझ दिन्छ। यो डाटामा चित्र कोर्दै, तपाईं परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ कुन वेबसाइटसँग काम गर्न लायक छ। कम मूल्या rated्कन गर्ने प्रतिस्पर्धी लि link्क भवनको जाँच गर्न मन दिनुहोस्, खराब लिंकहरूले तपाईंको एसईओलाई अझ बढी प्रभाव पार्न सक्दछ।
Follow. अनुयायीको खेती
दर्शकहरू सोशल मीडिया मार्केटिंगको लागि महत्त्वपूर्ण छ जैसे यो ग्राहकहरू, आपूर्तिकर्ताहरू, र व्यापार साझेदारहरू समावेश गर्दछ। फलोअरहरूले सामान्यतया दिइएको मार्केट कोठामा धेरै ब्रान्डहरूमा चासो व्यक्त गर्छन्। त्यसकारण, तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूका अनुयायीहरूलाई तिनीहरूको व्यवसायले प्रदान गर्ने उत्पादन वा सेवा प्रयोग गर्न प्रेरित गर्न उनीहरूलाई संलग्न गराउने प्रयास गर्नुहोस्।
Brand. ब्रान्ड भेदभाव
जब व्यवसायले एसईओ रणनीति अपनाउँछ, यसले सामग्री उत्पादन गर्दछ, ग्राहकहरूसँग अन्तर्क्रिया बढाउँदछ, र वेबसाइटको प्रदर्शनलाई अनुकूलित गर्दछ। यी गतिविधिहरूले व्यवसायको छविलाई आकार दिन्छन् किनकि ती सार्वजनिक रूपमा पहुँच योग्य छन्। तसर्थ, ग्राहकहरु SEO को माध्यम बाट तपाईको उत्पादनहरु र सेवाहरु को विशिष्टता बुझ्दछन्।
Rove. सुधार क्षेत्रहरू
व्यापारले प्रतिस्पर्धीहरूका कमजोरीहरू सिकेर फाइदा लिन सक्छ। एसईओ को उपयोग गरेर, तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु संग ग्राहक असंतोष को स्तर को पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ खोजी ईन्जिनहरूले प्रतियोगीहरु को बारे मा नकारात्मक समीक्षा उत्पादन गर्न सक्छन् कि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ग्राहकहरु उत्पादन को गुणवत्ता को बारे मा गुनासो छ, तपाइँको उत्पादनहरु को गुणवत्ता को बढावा मा ध्यान दिनुहोस्।
6. गरीब रणनीतिहरूको पहिचान
व्यापार अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिस्पर्धीहरूले अपनाएको रणनीतिहरूको विश्लेषण र मूल्या should्कन गर्नुपर्छ। SEO ले व्यापारलाई प्रतियोगीहरूको SEO रणनीतिहरूको सामर्थ्य र कमजोरीहरू पहिचान गर्न सक्षम गर्दछ। त्यसकारण, यस्तो प्रक्रियाले अप्रभावी अभ्यासहरू प्रकट गर्दछ जुन तपाईंको व्यवसायबाट टाढा रहनु पर्छ।
Relations. सम्बन्ध निर्माण
तपाईंको व्यवसायले आपसी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धीहरूसँग काम गर्न सक्छ। पाहुना ब्लगिंग व्यापार सम्बन्ध सुधार गर्ने एक तरीका हो। व्यापारले प्रतियोगीको वेबसाइटमा अनुयायीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान गर्न अतिथि ब्ल्गिंग अवसर प्रयोग गर्न सक्दछ। तपाईले बदल्लै अतिथि ब्ल्गिंग अवसर पनि ती कम्पनीहरूमा दिनुपर्दछ जुन उद्योगमा आपसी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने इरादा राख्दछ।
तपाइँको व्यवसायले प्रतियोगीहरु द्वारा अपनाईएको डिजिटल र SEO रणनीतिहरु बाट महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। यसको पछाडिको मुख्य लक्ष्य भनेको प्रतिस्पर्धीहरूको रणनीतिमा फेला परेका कमजोर एसईओ पोइन्टहरू सुधार गरेर अनलाइन दृश्यता र ग्राहक ट्राफिक सुधार गर्नु हो। तपाईंको व्यवसायले प्रतिस्पर्धीहरू द्वारा प्रयोग प्रभावी डिजिटल रणनीतिहरू परिमार्जन गर्न सक्दछ।